Awooda Qofka | Martech Zone
Wednesday, April 25, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Dhowr sano ka hor, waxaan dhab ahaan kulan la yeelannay qaar ka mid ah guddiga Cisco Telefishanka oo waxay ahayd wax aan ka yarayn oo la yaab leh. Lahadalka qof cabir buuxa iyo fool-ka-waji wuxuu leeyahay qiime aan caadi aheyn. Dadka ka shaqeeya Cisco way oggol yihiin waana tan soo saareen faahfaahin ku saabsan awooda shirarka shaqsiyeed.
Baahida loo qabo suuq caalami ah oo la qaybiyey ayaa wax ka beddeley habka ururadu ula xiriiraan asxaabta, alaab-qeybiyeyaasha / la-hawlgalayaasha, iyo macaamiisha laga yaabo inay ku kala fogaadaan masaafo dheer. Daraasad caalami ah oo ay sameysay Unugga Sirdoonka Dhaqaalaha, oo ay kafaala qaadayso Cisco, ayaa lagu qiimeeyay 862 hoggaamiyeyaasha ganacsiga 'waxa ay ka qabaan qiimaha shirarka shaqsi ahaaneed iyo saameynta ay ku leeyihiin in ka badan 30 geeddi-socodka ganacsiga. Haddaba, waa maxay xukunka? Isgaadhsiinta qof ahaanta ahi ma tahay mid itaal roon sida aan u malayno inay tahay?
Infographic wuxuu u taagan yahay natiijooyinka a sahan caalami ah oo ay samaysay Unugga Sirdoonka Dhaqaalaha, oo ay kafaala qaadayso Cisco, oo qiimeeyay 862 hoggaamiyeyaal ganacsi 'dareenkooda ku saabsan qiimaha shirarka shaqsiyeed iyo saameynta ay ku leeyihiin in ka badan 30 geeddi-socodka ganacsiga.
Tags: Ciscoisgaarsiintaqof ahaanFiidiyowyada SuuqgeyntaTechnologyjoogitaanka telefishinka
Dhibic weyn Doug! Tani waa sababta aanan marnaba u diidi karin buskudka gabar indha indheynta:).
Fikradani waxay sidoo kale xiriir la leedahay Guy Kawasaki 4 tiir ee sixirka. Shakhsiyan waa awood badan yahay, laakiin waxaad u baahan tahay inaad la mid noqotid, lagu kalsoonaan karo, ka duwan tahay, iwm.